Mindfulness is’nt difficult, we just need to remember to do it
The Centre provides facilities for the teaching and practice of satipatthana vipassana or insight meditation in the tradition of the late Venerable Mahasi Sayadaw of Myanmar. All meditators (yogis) are welcome to the intensive Vipassana (Insight) Meditation retreats.
အသစ်ဆောက်လုပ်တော့မည့် ပဏ္ဍိတာရာမ ဆစ်ဒနီသာသနာ့ရိပ်သာစီမံကိန်း
ဩစတေးလျနိုင်ငံ ဆစ်ဒနီမြို့၌တည်ရှိသော ပဏ္ဍိတာရာမသာသနာ့ရိပ်သာအောင်မြေကို ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၆၁ ခု၊ တပို့တွဲလဆန်း ၂ရက်၊ ခရစ်သက္ကရာဇ် ၂၀၀၀ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၆ရက် တနင်္ဂနွေနေ့တွင် ဆရာတော်အရှင်ပညာသာမိ(အောင်စည်ဆရာတော်)က မျိုးစေ့ချတည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပြီး အနန္တ ကျေးဇူးတော်ရှင် ပဏ္ဍိတာရာမရွှေတောင်ကုန်းဆရာတော်ဘုရားကြီးက ချီးမြှောက်ဖွင့်လှစ်ပေးတော်မူခဲ့ပါတယ်။
The term Vipassana can be explained asaway to haveapenetrating insight or understanding into the true nature of the physical and mental phenomena in oneself: impermanence, dissatisfaction and non-self. With Vipassana meditation asaguide to see things as they truly are…
We do not practice meditation to gain admiration from anyone. Rather, we practice to contribute to peace in the world. We try to follow the teachings of the Buddha, and take the instructions of trustworthy teachers, in hopes that we too can reach the Buddha’s state of purity. Having realized this purity within ourselves
UNIQUE Talk Show ... See MoreSee Less
Comment on Facebook 10159284220949459
ပဏ္ဍိတာရာမဆစ်ဒနီသာဿနာ့ရိပ်သာ ဒါယကာ ဒါယိကာမ များနှင့် ဓမ္မမိတ်ဆွေသပ္ပုရိသသူ‌ တော်စင်အလှုတော်ရှင် များခင်ဗျား၊၊
ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ် ရောဂါ (COVID-19 Corona Virus) ကာကွယ်ရေးအတွက် နယူးဆောက်သ်ဝေးလ် ပြည်နယ်အစိုးရမှထုတ်ပြန်ထားသော စည်းကမ်းကန့်သတ်ချက်များအရ ၈.၁၁.၂၀၂၀ (တနင်္ဂနွေနေ့) တွင် ကျင်းပရန်စီစဉ်ထားသော မဟာ ဘုံကထိန်သင်္ကန်းကပ်လှူပူဇော်ပွဲကြီးအား သတ်မှတ်ထားသည့်အတိုင်း လူအများဖြင့်ကျင်းပနိုင်ခွင့် မရှိ ပါသဖြင့်၊ ကျောင်းဝေယျာဝေစ္စ အဖွဲ့မှ ဆရာတော်ဘုရားထံ အကျဉ်းချုံး ကထိန်ခင်းခွင့်လျှောက်ထားခဲ့ပြီး ယခုနှစ်အတွက် သံဃာငါးပါးနှင့်သာ အကျဉ်းချုံး ကထိန် သင်္ကန်းကပ် လှုပူ‌ ဇော် ပြီး၊ ယခုနှစ် မဟာဘုံကထိန် သင်္ကန်းအလှူတော်ကြီးကို မိမိတို့ ကိုယ်တိုင်ဆပ်ကပ် လှူဒါန်းနိုင်ကြပါပြီခင်ဗျား၊၊
လှုကထိန် မြတ်သင်္ကန်း ဆိုသည် မှာ တစ်နှစ်တွင် တစ်လအတွင်းသာလှူဒါန်းနိုင်သော ၊ မြတ်ဗုဒ္ဓ ၏သားတော် သံဃာထုတရပ်လုံးအားရည်စူး၍ လှုဒါန်းခွင့် ရရှိ သည့်အတွက် အလွန် ထူးမြတ်‌ လှပါသော၊ မြတ်နိဗ္ဗာန် လမ်း သို့လှမ်းနိုင်မည့် တိုင် အထောက်အပံ့ ဖြစ်‌ စေနိူင်သော၊ အကျိုးထူး လွန်းသည့် မြတ်သောဒါနဖြစ်သည့် အတွက်၊ မိမိတို့ တဦးချင်း / မိသားစု အစီအစဉ်ဖြင့် ကထိန် သင်္ကန်းအလှူတော် ကို
1st Nov 2020 မှ 29th Nov 2020 တစ်လအတွင်း ကပ်လှုပူဇော် လှူဒါန်းနိုင် ပါသည်။
NSW Covid-19 Restrictions တည်ဆဲစည်းမျဉ်း စည်းကမ်းများ လိုက်နာ၍ မိမိတို့ ကိုယ်တိုင် ပဏ္ဍိတာရာမ ဆစ်ဒနီကျောင်းသို့သွား ရောက် ၍ ဖြစ်စေ၊ သွားရောက်ရန်အခက်အခဲရှိပါက ကျောင်း၏ ဘဏ်စာရင်းသို့ တိုက်ရိုက်ငွေလွှဲ၍ဖြစ်စေ၊ လှူဒါန်းနိုင်ပါကြောင်း လေးစားစွာ ဖြင့် နိဗ္ဗာန်အကျိုး မျှော်ကိုးရည်သန် ၍ နှိုးဆော်လိုက်ရပါသည်။
ပဏ္ဍိတာရာမ ဆစ်ဒနီ သာဿနာ့ရိပ်သာ
In ZAWGYI font
ပ႑ိတာရာမဆစ္ဒနီသာႆနာ့ရိပ္သာ ဒါယကာ ဒါယိကာမ မ်ားႏွင့္ ဓမၼမိတ္ေဆြသပၸဳရိသသူ‌ ေတာ္စင္အလႈေတာ္ရွင္ မ်ားခင္ဗ်ား၊၊
ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ေရာဂါ (COVID-19 Corona Virus) ကာကြယ္ေရးအတြက္ နယူးေဆာက္သ္ေဝးလ္ ျပည္နယ္အစိုးရမွထုတ္ျပန္ထားေသာ စည္းကမ္းကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားအရ ၈.၁၁.၂၀၂၀ (တနဂၤေႏြေန႔) တြင္ က်င္းပရန္စီစဥ္ထားေသာ မဟာ ဘုံကထိန္သကၤန္းကပ္လႉပူေဇာ္ပြဲႀကီးအား သတ္မွတ္ထားသည့္အတိုင္း လူအမ်ားျဖင့္က်င္းပနိုင္ခြင့္ မရွိ ပါသျဖင့္၊ ေက်ာင္းေဝယ်ာေဝစၥ အဖြဲ႕မွ ဆရာေတာ္ဘုရားထံ အက်ဥ္းခ်ဳံး ကထိန္ခင္းခြင့္ေလၽွာက္ထားခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္အတြက္ သံဃာငါးပါးႏွင့္သာ အက်ဥ္းခ်ဳံး ကထိန္ သကၤန္းကပ္ လႈပူ‌ ေဇာ္ ၿပီး၊ ယခုႏွစ္ မဟာဘုံကထိန္ သကၤန္းအလႉေတာ္ႀကီးကို မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ဆပ္ကပ္ လႉဒါန္းနိုင္ၾကပါၿပီခင္ဗ်ား၊၊
လႈကထိန္ ျမတ္သကၤန္း ဆိုသည္ မွာ တစ္ႏွစ္တြင္ တစ္လအတြင္းသာလႉဒါန္းနိုင္ေသာ ၊ ျမတ္ဗုဒၶ ၏သားေတာ္ သံဃာထုတရပ္လုံးအားရည္စူး၍ လႈဒါန္းခြင့္ ရရွိ သည့္အတြက္ အလြန္ ထူးျမတ္‌ လွပါေသာ၊ ျမတ္နိဗၺာန္ လမ္း သို႔လွမ္းနိုင္မည့္ တိုင္ အေထာက္အပံ့ ျဖစ္‌ ေစနိူင္ေသာ၊ အက်ိဳးထူး လြန္းသည့္ ျမတ္ေသာဒါနျဖစ္သည့္ အတြက္၊ မိမိတို႔ တဦးခ်င္း / မိသားစု အစီအစဥ္ျဖင့္ ကထိန္ သကၤန္းအလႉေတာ္ ကို
1st Nov 2020 မွ 29th Nov 2020 တစ္လအတြင္း ကပ္လႈပူေဇာ္ လႉဒါန္းနိုင္ ပါသည္။
NSW Covid-19 Restrictions တည္ဆဲစည္းမ်ဥ္း စည္းကမ္းမ်ား လိုက္နာ၍ မိမိတို႔ ကိုယ္တိုင္ ပ႑ိတာရာမ ဆစ္ဒနီေက်ာင္းသို႔သြား ေရာက္ ၍ ျဖစ္ေစ၊ သြားေရာက္ရန္အခက္အခဲရွိပါက ေက်ာင္း၏ ဘဏ္စာရင္းသို႔ တိုက္ရိုက္ေငြလႊဲ၍ျဖစ္ေစ၊ လႉဒါန္းနိုင္ပါေၾကာင္း ေလးစားစြာ ျဖင့္ နိဗၺာန္အက်ိဳး ေမၽွာ္ကိုးရည္သန္ ၍ ႏွိုးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။
အမႈေဆာင္အဖြဲ႕ ... See MoreSee Less
Comment on Facebook ပဏ္ဍိတာရာမဆစ်ဒနီသာဿနာ့ရိပ်သာ...
ကထိန်သင်္ကန်း(၃)စုံ ဆက်ကပ်လှူဒါန်းပါသဖြင့် ဝမ်းမြောက်နုမော်သာဓုခေါ်ဆိုတော်မူကြပါကုန်လော့။
သာဓု သာဓု သာဓု ... See MoreSee Less
Comment on Facebook 131379179458_10159174975834459
သာဓု သာဓု သာဓု ပါ .....
© 2021 PSMC. All rights reserved.